डोल्पामा फोन सेवा अवरुद्ध हुँदा पत्रकार, कर्मचारी, स्थानीयवासी हैरान ! - नेपालबहस
गृहपृष्ठ बिज्ञान/प्रविधि टेलिकम डोल्पामा फोन सेवा अवरुद्ध हुँदा पत्रकार, कर्मचारी, स्थानीयवासी हैरान !
जाजरकोट । दुई दिनदेखि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध हुँदा डोल्पामा समस्या भएको छ । एक महीनामा तीनपटक टेलिफोन सेवा अवरुद्ध हुँदा डोल्पाका स्थानीयवासी हैरान भएका छन् ।
मौरेलेकमा टेलिफोन टावरमा समस्या आएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले खराब भएको ठाउँमा मर्मतका लागि कर्मचारी खटाइएको छ । सदरुमकाम दुनैबाट धेरै टाढा भएका कारण मर्मतमा समस्या भएको नेपाल टेलिकम डोल्पाले जनाएको छ ।
अहिले फोन अवरुद्ध भएसँगै डोल्पाका सबै ठाउँको सञ्चार सम्पर्कविच्छेद भएको छ । जिल्लाभरि कम सञ्चार पहुँच भएको डोल्पामा पटक–पटक फोन सेवा अवरुद्ध हुँदा पत्रकार, कर्मचारी, स्थानीयवासी हैरान भएका हुन् ।
प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक पकेट कार्यक्रम’ अन्तर्गत रु ५० लाख बजेटअन्तर्गत २५ लाख बराबरको भवन तयार भएको छ भने रु २५ लाख बराबरको सामान खरीद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको ज्वाला साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष वीरेन्द्र चदाराले जानकारी दिए । भवनको भित्री काम मात्र बाँकी रहेको छ ।
नलगाड १, २ र ४ को छेप्का, पाली, कल्प, चिउरीलगायतका क्षेत्रमा किसानले करीब रैथाने जातको माहुरीका १४ हजारभन्दा बढी घारबाट जैविक मह उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् ।
उनीहरुले प्रतिधार्नी ‘साढे दुई केजी’ बराबर रु एक हजार ५०० मा बिक्री गर्ने र सहकारीले खरीद गरेर रु एक हजार ७५० मा बिक्री गर्ने गरेको अध्यक्ष चदाराको भनाइ छ ।
मह उत्पादनका लागि यो क्षेत्र अत्यन्तै सम्भावनायुक्त भएकाले प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहले बताए।
यहाँ उत्पादन गरिएको ५० क्विन्टल मह अझै बिक्री नभएर थन्किएको छ भने एक हजार ५०० केजी बिक्री भइसकेको छ । मह बजारीकरण हुन नसक्दा समस्या भएको स्थानीयवासी लालबहादुर खत्रीले बताए । प्रशोधन केन्द्र स्थापनासँगै थप बजारीकरणका साथै देशका अन्य ठाउँमा लैजान सजिलो हुने व्यापारीले बताएका छन् ।
अघिल्लो लेखभारतको धौलीगङ्गा बाँध खोलियो, नागरिकलाई नदी छेउछाउ नजान अनुरोध !
अर्को लेखसामुदायिक वनका पदाधिकारी अनुसन्धानका लागि थुनामा
चङ्खेलीमा एक महिनादेखि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध, सेवाग्राही मर्कामा
डोल्पामा दलित परिवारका ४५० घर बन्ने
दुर्गमलाई सुगमसँग जोड्ने टेलिफोन सेवा तीन दिनदेखि ठप्प
अब फोनमा कुरा गर्न अग्ला डाँडापाखा र सुरीला रुख चढ्न पर्दैन